Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Kenya iyo midka Itobiya – Faarax M. dawaare iyo Cabdi iley
Baarlamaanka Kenya iyo midka Itobiya – Faarax M. dawaare iyo Cabdi iley
Posted by ONA Admin	/ November 22, 2012
Xusuus- Kenya iyo Itobiya waa laba dal oo daris ah. Dal ku faana in aan waligii la soo gumaysan iyo dal u dabaaldagi doona Sanadguuradii 49aad ee Xoriyadiisa 12ka December 2012. Labada dalba waxay sheegtaan inay leeyihiin xukuumado Dimoqraadi ah oo shacabka uu soo doorto.
Baarlamaanka dalka Kenya wuxuu ka kooban yahay 224. Sida uu qorayo dastuurkooda 210 ayay dadweynaha si toos ah u soo dooran karaan, 12na waa la magacaabi, 2bana (Afhayeenka iyo Xeer-ilaaliyaha guud) toos ayay u soo galayaan. Doorashadii ugu dambaysay ee 2007dii waxaa soo galay baarlamaanka 23 xisbi. Toban xisbi waxay heleen hal hal kursi, sagaal xisbina 2-4. Meesha xisbiga ugu kuraas badnaa oo ahaa isbahaysiga Orange Dem. Movement uu helay 99 kursi. Halka Baarlamaanka Itobiya oo ka kooban 547 uu doorashadii ugu dambaysay ee 2010 ay ku guulaysteen xisbiyadii mucaaradka hal kursi, 546 kursina uu qaatay oo sacabka loogu tumay xisbigii EPRDF ee ka taliya dalka. Markii la weydiiyay Mesles Zanwi siday ku dhici kartaa arintaana wuxuu ku jawaabay; waa dimoqraadiyad.
Hadaba, labadaa baarlamaan miyay dhici kartaa inay iskuse ula xisaabtamaan xukuumadahooda ama ay uga difaacaan dadweynaha ay matalaan ee soo doorta xadgudubka lagu sameeyo. Jawaabtu way iska cadahay. Iyadoo muuqaal ahna waxaan ka kala daawanay saxaafadda labada dal iyo TV-yadooda.
Qalalaasaha ka dhacay Nairobi iyo Gaarsisa mudanaayaasha baarlamaanka Kenya si aad ah ayay uga dhiidhiyeen waxayna ballan ku qaadeen in maxkamad la soo taagi doono saraakiishii ka dambeeyay arimahaa.
Itobiya waxaa ka jira xukun u dhigma midka Waqooyiga Kuuriya (North Korea), hasa ahaatee aan u cadaysan karin sidooda oo kale, maadaama ay tahay Itobiya dawarsi iyo muaawana ku nool. Tan iyo inta la xasuusto taariikhda dalkaa waligeed kama jirin shacab xor ah oo xukuumadiisa kala doodi kara dambiyada ay ka galaan saraakiisha ciidanka ee ku nool boobka dadweynaha. Waxaa caalamka laga wada daawaday xadgudubka iyo xasuuqa ay ciidamada Itobiya ku hayaan dadweynaha aan waxba galabsan ee Ogadenya, Gambela, Oromiya iyo kuwa kaleba. Waxaa sidoo kale meel walba laga daawaday Cabdi iley oo ah dabadhilifka ay Itobiya u adeegsato laynta shacabka masaakiinta ah isagoo ku faanaya inuu ciidamadii Itobiya kaga filnaaday xasuuqa dadkiisa, oo ciidamadii Itobiya uu ka badbaadiyay goobaha dagaalka.
Iska daa shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ee ku jira halganka gobanimadoon, waxaa la ogsoon yahay sida qofkii kali ahaa Girma Seifu ee mucaaradka kaga jiray baarlamaanka uu R/Wasaaraha cusub sharafta ugaga qaaday maalintuu soo jeediyay inay xukuumadda xisbigiisa mucaaradka wadahadal la furto.
Xusuusta qofkii caqli leh uuna waligii iloobi doonin waxaa ka mid ah, ereyadii ka soo baxayay afkiisa Cabdi iley waaguu ka hadlay mudane Faarax M. dawaare dhimashadii KT Meles Zanawi isagoo sheegay dhibaatada uu u gaystay umadda Somaliyeed guud ahaan. Waa laba nin faarax Macallin iyo cabdi iley, oo dadka qaar ay u arkaan inay isku reer yihiin, oo midna ka dhiidhiyay dhibaatada loo gaystay shacabka Somaliyeed ee Gaarisa iyo Nairobi ee soo doortay, midna uu ku faanayo waxaan ka badbaadiyay ciidamada Itobiya dagaalka ay kula jireen ONLF, isagoo isku soo sawiraya odayaal uu bahdilay oo sharaftii uu ka qaaday iyo maydka dadka shacabka ah ee la dhashay. Waa taariikh.